Asa fanaovan-gazety eto Mahajanga : Nijoro ny OJM faritra manoloana ireo fampihorohoroana samihafa
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → janvier → 19 → Asa fanaovan-gazety eto Mahajanga : Nijoro ny OJM faritra manoloana ireo fampihorohoroana samihafa
Redaction Midi Madagasikara 19 janvier 2016 2 Commentaires
Filoha lefitra sy mpanolotsaina OJM Mahajanga.
Tsy vao androany fa efa matetika ny fampihorohoroana mpanao gazety eto Mahajanga. Ireo rehetra izay tsy mahazaka ny famoahana ny marina dia saika lasa manangam-pahavalo ny mpanao gazety avokoa. Manomboka eo ny ramatahora. Mandeha hatramin’ny fandrahonana samihafa satria voatohintohina ny amin’ny tsy mety ataony ny sasany. Misy mihitsy aza moa ny hafa no manao farateny fa na ho ela na ho haingana tsy maintsy ho voany ihany ilay mpanao gazety na amin’ny lafiny inona na inona.
Manoloana io indrindra no nijoroan’ireo mpitarika ny OJM eto an-toerana, notarihan’Atoa Tony Josoa sy Ramatoa Vero Andrianarisoa. Izay nanambara fa manameloka amin’ny lafiny rehetra ny fampihorohoroana mpanao gazety. Samy manao ny asany ny rehetra hoy izy ireo ka tsy tokony tsy hisy fanohintohinana. Niantso ny vahoaka sy ireo tompon’andraikitra isan-ambaratongany ihany koa izy ireo, mba hisin’ny fiara-miasa matotra amin’ny fanomezana loharanom-baovao, hahafan’ireo mpanao gazety mamoaka ny vaovao marina sy ara-potoana.
Tetsy ankilany nampanantena ireto zoky no sady Raiamandreny fa hanara-maso ny asa izay ataon’ireo mpanao gazety tsirairay avy satria izany dia anisan’ny andraikitr’ity rafitra atao hoe: Ojm ity. Hiaro ihany koa anefa indrindra indrindra raha toa ka misy ny tsindry hazolena mahazo ireo namana, manoloana ny fanjakazakana sy fandrahonana ataon’ny sasany milaza fa manana fahefana ambony.
Tsopiaina 19 janvier 2016 at 11 h 49 min · Edit
mbola eo ny sasany mandefa émission « ctic tac dou » nefa ilay olona mpanao émission efa migadra any Miandrivazo!!!! ô ry zareo a! aiza ho aiza ny recoupement sy ny fahalalanareo ny asanareo e? saimbola loatra ve? tsy mahita lavitra ary tsy vonona handalina mitsy ve?
Tsopiaina 19 janvier 2016 at 11 h 47 min · Edit
mba te hanararaotra manoratra ho anareo mpanao gazety eto mahajanga ! mila manao formation angamba hamantaranareo ny atao hoe « vaovao/journal » sy ny « publicité » sy ny « petites annonces » etc………fa ny ankabeazanareo dia manafangaro ireo telo ireo! misy ny vaovao tsy ahitàna afatsy plateau adiniray publicité sur plateau fotsiny, eo koa ny famakiana filazàna manjo! tsy natao ho an’izany ny vavao tompokolahy sy tompokovavy hajaina! Fantaro ny asanareo, amboary ny fandaminana! ao koa ny critères de recrutement sy ny fanaovana publicité : ilay fanononana sy fanoratana teny Frantsay re tompoko!!!! journaliste ianareo, maneho zavatra en public ary fototra tokony hianaran’ny ankizy ny zavatra rehetra asehonareo! ho an’ireo miseho ho animateurs manokana e! ry M3 mazoto manao émission! ny fihaingonareo mba jereo, ataovy fitafy MENDRIKA fa tsy SEXY, ny lehilahy tsy ho mamo anaty animation, ny spectateurs manana droit ho mamo fa ianareo JAMAIS tokony tsy misotro akory!